Kale Marches - World March
Bogga ugu weyn » Kale Marches
Dunida 2aad Maarso 2018-2019
Laga bilaabo Oktoobar 2, 2018 ilaa Maarso 8, 2019
Halkan waxaad ka iibsan kartaa buugga 2-da Maarso ee Adduunka
South American Maarso 2018
Laga soo bilaabo 16 laga bilaabo Sebtembar ilaa 13 laga bilaabo Oktoobar
La Koonfurta Ameerika ee loogu talagalay Nabadda iyo Dhibaatooyinka (MS) ayaa ku safraya in ka badan 11.500 kilomitir 28 maalmaha Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Suriname, Brazil, Argentina y Chile
Tallaabadan ayaa kor u qaaday haweenka u dhaqdhaqaaqa ururka "Dunida la'aan Warsame iyo Rabshado"Qaybta Ecuador kuwaas oo ka qaybgalay Bartamaha Ameerika ee Maakhir 2017 oo loo yaqaanay goobjoogayaal caalami ah.
Kooxda yar yar waxay la xiriirtay dhaqdhaqaaqayaasha magaalooyinka kale Bogotá, Lima, Santiago, Sucre, Córdoba, Sao Paulo waxyarna tartiib tartiib ayaa loo sameeyay shabakad, dhib la'aan la'aan, iyo waddo, dhacdooyin, wada sheekeysi iyo waliba koox kaqeybgalayaal ah kooxda asaasiga ah taasoo ka dhigaysa safarka oo dhan. Later, dad badan oo bani-aadmi ah, kuwa deegaanka ah, dhaqdhaqaaqayaasha iyo kuwa aan firfircooneyn ayaa ku biiray, iyo sidoo kale ururrada, jaamacadaha, dugsiyada, degmooyinka iyo ururada wadamada kala duwan kuwaas oo, wadajir u sameyeen bishii Maarso.
Lixdan actor oo ka socda Waddada Biyaha, oo ka mid ah kuwii ku soo barbaaray afar Colombiiyiin oo safar dhamaystiran sameeyay, waxay isku xireen Santiago de Chile iyo kuwii ka yimid Waddada Atlantic waxa ay ahayd marxaladdii ugu dambaysay ee Maarso ee socdaalkeedii afartan iyo saddexaad, intii u dhexaysay magaalooyinka iyo degmooyinka, halkaas oo dhacdooyin badan lagu sameeyay horumarinta Nabadda iyo Dagaalka.
Macluumaad buuxa ayaa laga arki karaa WEB
Waxaad arki kartaa ama soo dejisan kartaa buugga Koofurta Maraykanka Maarso bilaash.
Central American 2017
Laga soo bilaabo 10 laga bilaabo Sebtembar ilaa 16 laga bilaabo Sebtembar
Dibadbaxyada 1ª Bartamaha Ameerika ee loogu talagalay Nabadda iyo Dhibaatooyinka (MC) reWaxay ku ordeen xawaare 3.400 maalmaha 7.
Waxay ahaayeen badan oo socod, dhacdooyinka, wada hadal, xafladaha dhaqanka iyo fasaxyada loo sameeyey meelo 10, oo ay ku jiraan magaalooyinka iyo degmooyinka ee Honduras (Peña Blanca, San Pedro Sula iyo San Lorenzo), Guatemala (City iyo Mixco), El Salvador (Sonsonate, San Salvador iyo San Miguel), Nicaragua (Xuduudda), Panama iyo Costa Rica (San José iyo Heredia).
Garsoorayaasha waxay ahaayeen koox dhaqdhaqaaqayaal ah 74, inta badan ardayda yaryar, laakiin sidoo kale dadka waayeelka ah, oo ay ku jiraan carruurta qaarkood. Intii lagu guda jiray safarka waxay la socdeen dhaqdhaqaaqayaasha Ecuador oo ah kormeerayaal caalami ah.
Wafdi ka socda Costa Ricans ayaa soo gaaray xadka Peñas Blancas ilaa MC ka yimid Nicaragua. Saacadaha dambe 1ª MC ee Xasiloonida iyo Nabadgalyada ayaa yimid caasimadda, San José en el Campus Omar Dengo oo ka mid ah Jaamacadda Qaranka ee Costa Rica (UNA), waxaa soo helay boqolaal arday, dad firfircoon iyo masuuliyado tacliin leh Dhakhtar Rector Alberto Salom madaxa.
Imaanshahiisii ​​wuu furay foro iyo Jaamacadaha Maalmaha "U fiirsashada rabshadaha iyo nabadda" kaas oo la qabtay 2dii maalmood ee xigay, 14ka iyo 15ka Sebtember, 2017. Waxay ahayd dhammadkii dadaalkii weynaa ee ay kooxdu la timid ku dhowaad daal, gaar ahaan dhibaatooyinka ay kala kulmeen caadooyinka iyo xuduudaha laga soo gudbo, iyada oo dib u eegis aan dhammaad lahayn iyo muddo dheerba lagu jiray. sugitaan, taas oo xaalado badan keentay dib u dhac ku yimid falalka qorshaysan. Waxaa laxaqiijiyey in dowladaha gobolka qaar kamid ah ay dhib ka dhigayaan dadka inay si xor ah u socdaan.
Tallaabadan ayaa kor u qaaday ururka "Adduunka aan lahayn dagaal iyo rabshad la'aan" Central America cutubka waxaana lagu tiriyaa wada-shaqeynta dhowr jaamacadood, hay'ado iyo ururiyayaal.
Buuggan bartamaha Central March waa la arki karaa ama waxaa laga soo dejisan karaa lacag la'aan.
Laga soo bilaabo 2 ee Oktoobar laga bilaabo 2009 ilaa 2 ee Janaayo ee 2010
Buugga 1ª World March waxaa laga arki karaa internetka halkan